Yohane Adiyisɛm 7 NA-TWI - Zjevení Janovo 7 SNC | Biblica América Latina
Yohane Adiyisɛm 7 NA-TWI - Zjevení Janovo 7 SNC
1Eyi akyi no, mihuu abɔfo baanan sɛ, wogyinagyina asase ntweaa anan no so a, wɔretwe mframa anan a ɛwɔ asase so no san sɛnea ɛbɛyɛ a, mframa biara remmɔ wɔ asase ne po so ne baabiara. 2 Ɛnna mihuu ɔbɔfo foforo a ofi apuei reba a okita Onyankopɔn a ɔte ase no nsɔwano. Ɔteɛɛm frɛɛ abɔfo baanan no a na Onyankopɔn ama wɔn tumi sɛ wɔnsɛe asase ne ɛpo no. 3 Ɔbɔfo no kae se, “Monnsɛe asase ne ɛpo anaa nnua kosi sɛ yɛde nsɔwano bɛhyɛ Onyankopɔn asomfo no agyirae.”
NA-TWI : Yohane Adiyisɛm 7